24 ịmata banyere Antarctica | Network Meteorology
24 ịmata ihe banyere Antarctica
La Antarctica Ọ bụ kọntinent na, kemgbe nchọta ya (nke ekwenyere na ọ bụ na 1603), dọtara uche mmadụ. N’iburu n’uche na ụwa dị okirikiri, na n’oge ahụ a maraworị na na North Pole, dị ezigbo nso na mpaghara polar, enwere mpaghara mpaghara nke snow kpuchiri, n’ụzọ ezi uche dị na ya ga-enwerịrị ihe yiri ya na South Pole.
Na narị afọ nke iri na asatọ, ndị Spen na Ndịda America bidoro itinye oge ọkọchị ha n’ebe ahụ, ọ bụ ezie na ọ ka ga-ewe narị afọ ọzọ maka ndị ọzọ fọdụrụnụ ịmara ịdị adị nke mpaghara a dị ịtụnanya, nnukwu Ọzara White. Site n'ebe ahụ, Antarctica ejirila nwayọ kpughee ihe omimi ya, mana ... n'ezie enwere opekata mpe ihe 24 ị maghị maka ya. 24 ịmata ihe banyere Antarctica nke ga-eju gị anya.
Foto - Christopher Michel
Antarctica bu oke ozara di n ’uwa, n’ agbanyeghi ma obu pere mpe 14,2 nde km2. Mgbakwunye dị egwu, ị naghị eche?
Gaghị ahụ ụdị anụ ọ bụla na-akpụ akpụ n’ebe a. Ọ bụ naanị kọntinenti ebe ọ na-adịghị.
Ihe mere ị ga - eji chọta anụmanụ ndị a ebe a, yana ihe kpatara ndụ ji dị mgbagwoju anya ọbụlagodi na ị na - ekpo ọkụ ọkụ, ọ bụ n'ihi na edekọla ọnọdụ okpomọkụ kachasị ala ruo ugbu a. Kedu? -93,2ºC. O doro anya na ihe karịrị otu n'ime gị ga-achọ ịnweta ofe ọkụ ole na ole, nri?
Nweghị ike ịrụ ọrụ na Antarctica belụsọ na ewepụrụ amamihe gị ezé na mgbakwunye. Ọ na-atọ ọchị, ọ bụghị ya? Mana agbanyeghị, anyị achọghị akụkụ ahụ abụọ ahụ ma ọlị. Nke mbụ mgbe ọ na-apụta, ọ bụrụ na ọ pụta, na-ebute oke ihe mgbu, nke ọzọ mgbe ọ malitere ịmalite ọkụ nwere ike bụrụ isi iyi nke nje.
Ọ bụ ezie na a na-akpọ ha anụ ọhịa bea pola, n'ezie naanị ihe ị ga-ahụ bụ ka ha hụrụ ebe ikpere mmiri. Na Antarctica, ị ga-ahụ ọtụtụ penguins, dị ka ihe atụ mara mma na onyonyo dị n'elu.
Foto - Lin padgham
Ọ bụrụ na i chere na ọ bụ naanị ugwu mgbawa na-arụsi ọrụ ike na mpaghara na-ekpo ọkụ ma dị jụụ ... ị zighi ezi. Na Antarctica enwere ugwu na-agbọpụ ọkụ. Ma ọ na-arụ ọrụ. Ọ bụ nke dị n’ebe ndịda. Na-akpọ Ugwu Erebus, ma chụọ kristal.
Foto - 23 nke ụtụtụ.com
Enwere Osimiri 300 ha anaghị akpụkọta na kọntinent a. Ọ ga-amasị gị ịmịnye mmiri? Mba, anaghị m egwu egwu.
Ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu na Antarctica dị 14,5ºC.
Foto - Peter rejcek
Enwere akụkụ ụfọdụ nke kọntinent a ebe ọ zaghị mmiri ma ọ bụ snow enweghị ihe ọ bụla n'ime afọ 2 gara aga.
Ma enwere cataracts. Ndị anyị na-eche n'echiche bụ mmiri transperent, mana ebe a o nwere nke na-acha uhie uhie.
Otu ọkà mmụta sayensị nọ na Antarctica nwere ike ịlụ nwa agbọghọ Nkeji 45.
Ibi ebe a bụ nnukwu nsogbu. Bụ kọntinent oyi, windier, drier na elu (Ọ dị elu karịa 2000m nke ọkwa mmiri) n'ụwa. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ndị mmadụ bi na Antarctica.
Ma enweghị oge. N'ezie, na Antarctica enweghị usoro oge.
Otu oge, 52 nde afọ gara aga, Ọ dị ọkụ dị ka California dị taa. O tinyere oke ohia nke okpomoku dika nke di na mpaghara Amazon, ma obu na ndida ndida Asia. Onye ọ bụla ga-ekwu ya ugbu a, nri?
Foto - Eziokwu
Ọ bụrụ na ị bụ onye kwere ekwe, ị kwesịrị ịma na e nwere ụka Kraist asaa na Antarctica.
Antarctica nwere naanị 1 igwe ndọrọ ego, nke bụ ogwe 1,01325, ma ọ bụ pascals 101325.
Na n'agbanyeghị eziokwu na ọ siri ike mgbe mmiri ozuzo, 90% nke ezigbo mmiri dị ebe a. Ee, oyi kpọnwụrụ. Mana n'ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọ bụrụ na oké osimiri agbazee ha nwere ike ibili ọtụtụ mita ...
Ansmụ mmadụ na-anwa mgbe niile (ma ka na-aga n'ihu taa) ịchị oghere na ókèala, ọbụlagodi ihe na-adịghị mma. Ọ bụ ya mere na na 1977 Argentina zigara nne dị ime na Antarctica ịmụ nwa n’ebe ahụ, naanị maka inwe ike inweta akụkụ nke kọntinent ahụ. Ọ bụ mmadụ mbụ a mụrụ na Antarctica.
Ọ bụ ezie na na-abịa n'ụwa na ebe ikuku ga-efe ruo 320km / h… Ọ bụ nsogbu.
Nnukwu iceberg a tụrụ atụ buru ibu karịa Jamaica: Umuoji. Mana ọ kewapụrụ site na Chile na 2000.
Ọtụtụ n'ime kọntinent ahụ na-ekpuchi ice kpamkpam, ma e wezụga 1% nke ngụkọta, ebe ọ gbazee na mbata nke Polar Light (gini
nke ga akpo mmiri na ozara a juru oyi).
Na-agbaze emeela obere mgbanwe na ike ndọda mpaghara.
Ogologo oyi nke ice na Antarctica dị ihe dị ka Ogbahu
Ọ bụ l'ẹka Chileke bẹ dụ biribiri. Ha nwere ụlọ akwụkwọ, post ọfịs, ụlọ ọgwụ, Intanet na ekwentị mkpanaaka.
Ugbu a ị marala ihe ole na ole gbasara mpaghara ebube a na oyi. Kedu ihe ị chere?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » 24 ịmata ihe banyere Antarctica
Ọzara na Spain
Oge nke oge